Boolsika New York Oo U Badinaya Iney Baxsadeen Ragii Weeararay Xarruntii Ganacsiga Westgate * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Boolsika New York Oo U Badinaya Iney Baxsadeen Ragii Weeararay Xarruntii Ganacsiga Westgate
New York, Mareeg.com: Iyadoo 2 bilood iyo bar ay kazoo wareegtay markii Alshabaab weerar dhiig badan ku daatay ku qaadeen xarrunta ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa soo baxay warar sheegay in raggii xarruntaas weeraray laga yaabo iney baxsadeen oo aan la qaban ama aan la dilin.
Booliska magaalada New York ee waddanka Maraykanka ayaa shaaciyay inay u badantahay inay baxsadeen afartii nin ee qaaday weerarkii Westgate, islamarkaana dilay ilaa 67 ruux.
Booliska magaalada New York waxay sheegeen inay warbixintooda ku saleeyeen macluumaad sirdoon ah oo ay heleen, waxeyna warbixinta booliska magaalada New York beeninaysaa hadalo horay ay u jeediyeen saraakiisha dhanka ammaanka ee Kenya kuwaasoo sheegay in raggii weerarka qaaday lagu dilay iska horimaad ka dhacay gudaha xaruntaas.
Laamaha amaanka Kenya ayaa tirada ragii weeraray ku qiyaasay ilaa 10, waxeyna sheegeen in dhamaaantood la dilay, waxeyna sheegeen iney baarayaan meydka 4 ruux oo laga soo saaray dhismahaas.
Alshabaab oo sheegtay mas’uuliyadda weerarkii Westgate ayaa markii uu dhamaaday warbaahinta u sheegay in raggii weerarary xarruntaas ay shahiideen kadib markii ay guteen howshii ay baxeen.